Ikati yothando yeLaPerm | Amakati eNoti
Umfanekiso - Marylandpet.com
Ukuba ungomnye wabo bonwabele ukuphulula ikati eneenwele ezigobileyo, kunye ILaPerm Awuyi kuba nesithukuthezi, kodwa endaweni yoko yinto eyindoda enoboya kakhulu ezenza ithandwe kwangoko.
Kwakhona, usempilweni entle kakhulu Kungenxa yokuba ayilohlanga oluye lwasetyenziswa kakhulu ngabantu, ke ixesha lokuphila kwalo lide, liphakathi kweminyaka eli-15 ukuya kwengama-20. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngaye?
1 Imvelaphi kunye nembali yeLaPerm
3 Ikati yeLaPerm inokuhlala iminyaka emingaphi?
4 Ukuziphatha kunye nobuntu
5 Ukunyamekelwa kwekati yeLaPerm
5.5 Uthando kunye nenkampani
6 Ixabisa malini ikati yeLaPerm?
7 Iifoto zekati zeLaPerm
Imvelaphi kunye nembali yeLaPerm
Umfanekiso - Eyeem.com
Imvelaphi yale kati intle iseMelika, ngakumbi kwikholoni yeekati ezilahlekileyo ezazihlala kwifama eOregon yokuzingela iimpuku nezinye iimpuku. Kwenye yenkunkuma Amantshontsho ekati azalwe enenwele ezigobileyo, kwaye ezinye zazo zathathwa sisibini esitshatileyo esenziwe nguLinda noRichard Koehl.
Ngokukhetha kunye nokuwela ezi kati zineenwele ezisongekileyo kunye nezinye ezilinganayo, kancinci kancinci i-Koehl gentlemen yaqala ukwazisa olu hlobo lwaziwayo nolungaqhelekanga oluvele ngokwendalo. A) Ewe, Ngo-1997 iklabhu yokuqala yohlobo lwaseMelika ebizwa ngokuba yi-LPSA yadalwa, kwaye ngo-2003 yabonwa njengohlobo lokuzaliswa yiklabhu ye-feline yamazwe aphesheya i-TICA..
Nangona kunjalo, ayaziwa kakhulu, kodwa sele kukho abafuyi eJapan, eNew Zealand okanye eNgilani.
Ikati yeLaPerm Ngubude obuphakathi ngokomlinganiselo, bunobunzima obungu-4 ukuya ku-6kg. Intloko yayo ingaphezulu okanye ngaphantsi koonxantathu, iindlebe zimile, kwaye amehlo, anokuba yi-almond, tyheli, igolide, luhlaza okwesibhakabhaka okanye luhlaza, ahluke kakuhle omnye komnye.
Umzimba wakhe ikhuselwe ngumaleko weenwele ezigobileyo ezinokuba ngowayo nawuphi na umbala, nokuba iqinile, i-bicolor, i-tricolor, i-chinchilla, njl. Idyasi yazo inokuba yinde, imfutshane, okanye ubude obuphakathi, kodwa iya kuhlala ithambile. Imilenze inde kodwa ilinganiswe kakuhle.
Ikati yeLaPerm inokuhlala iminyaka emingaphi?
Umdyarho awukhange usebenze kakuhle ngabantu, into evumela ukuba uphile ezimbalwa I-15-20 iminyaka. Kodwa ukuze oko kuzalisekiswe kumqolo wakho, kuya kufuneka ubonelele ngothotho lokhathalelo olusisiseko esiza kuphawula ngalo apha ngezantsi.
Umfanekiso - Askideas.com
Umlinganiswa wethu ophambili unoboya uyayithanda i-caress. Konwabele ukuhamba nomntu wakho ngelixa ubukele umabonwakude okanye xa ulele. Yi cwaka kakhulu, nangona ngenxa yemvelaphi yayo, ukongeza kuthando oluninzi, kuya kufuneka ukuba uzilolonge. Uthanda ukugxotha iintambo, iibhola, okanye izinto zokudlala ezifakiwe ngokungathi lizingela impuku.
Ukuthathela ingqalelo oku, kuyacetyiswa kakhulu ukuba ukusukela kusuku lokuqala ubonelele iigwegwe onokuzonwabisa naye.
Ukunyamekelwa kwekati yeLaPerm
Njengomkhathaleli wakho, kuyacetyiswa ukuba mnike ukutya okumgangatho ophezulu ukuze ikhule kwaye ikhule ngokufanelekileyo. Ke ngoko, kungcono ukuba ubanike ukutya kwendalo (inyama yomvundla, inyama yenkukhu, njl. Njl.), Okanye ukutya okungekho ukutya okuziinkozo kuba kukutya okuhlala kubangela i-aleji kwiikati.
Yonke imihla kufuneka udlule ikama yekati ukususa iinwele ezifileyo, kwaye amaxesha ngamaxesha kuya kufuneka ucoce amehlo kunye neendlebe ngegeyisi ecocekileyo (usebenzisa enye kwiliso ngalinye nendlebe) ngethontsi elithile wamehlo.
Nangona iyikati ezolileyo, ye kuthintele ukukruquka kuya kufuneka kakhulu ukuba uzinike ixesha. Isilwanyana kufuneka senze umthambo (play 😉) malunga nemizuzu engama-40-60 yonke imihla, sahlulwe saziiseshoni ezimalunga nemizuzu eli-15 ukuya kwengama-20.
Ukuza kwiikati eziqhelekileyo, impilo yabo ngokubanzi intle kakhulu. Okwangoku nangoku ubomi bakho bonke unokuba nesinye isifo, ezinjengomkhuhlane okanye umkhuhlane, ke ngalo lonke ixesha xa ukrokrela ukuba uyagula kuya kufuneka umse kugqirha wezilwanyana.
Kuya kuba lula ukuya kubuchwephesha ukuya tofa isitofu, beka i-microchip kwaye uyeke wathena yena ukuba awufuni ukuba afumane abantwana.
Njengayo nayiphi na ikati ejoyina usapho, iya kufuna ukuphathwa ngothando. Ke ngoko, kufanelekile ukuba mbonise ukuba umkhathalele kangakanani Ngaphandle kokumngxungxula, ukumzisela itoti yokutya okumanzi amaxesha ngamaxesha, nokumvumela ukuba achithe ixesha elininzi kangangoko ecaleni kwakho. Ukongeza, amaxesha ngamaxesha unokunika ukuphatha kwekati (ngaphandle kweenkozo).
Ixabisa malini ikati yeLaPerm?
I-LaPerm Cat sisilwanyana ekuya kuba lula kuwe ukuba usifumane kubafuyi kunakwivenkile yezilwanyana zasekhaya, kuba ayisiyohlobo olwaziwayo ngokukodwa. Ngaphandle koku, ixabiso lenjana aliphezulu kakhulu: ezinye I-600 euros.
Iifoto zekati zeLaPerm
Ucinga ntoni ngekati yeLaPerm? Ukuba ufuna ukubona ezinye iifoto zesi silwanyana sihle, nazi ezinye:
Umfanekiso - Pickapaw.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Ikati yothando yeLaPerm
Uyikhathalela njani ikati enenyanga